भिडियो Archives - Eall Nepal
तिम्रो नाममा कोरिरहेको यो पत्र कसरी सुरु गरुँ, आफैँ दोधारमा छु । यो कुनै प्रेम पत्र होइन कि यसमा मायाका कुराहरु हुनेछ । यो त केवल आग्रहपत्र हो, जसमा तिम्रो नाममा मैले आफ्ना मनका बहहरु ...
बुवाले कान्छी आमा बिहे गरेर अर्को घरबार गरे अनि सुखका साथ बस्दैछन् । आमाले पनि अर्कै बिहे गरेर गईन्, नयां दुनियां बसाईन् । अनि त्यहि आमा बुवाबाट जन्मेका एउटा १७ बर्षको दाई नबिन गिरी बिगत ...
गरिव दुखीका हिरो शिशिर भण्डारी हेटौंडा पुग्दा युवतीहरुले घेरेर भने- तपाई त कलियुगको भगवान हो (भिडियो हेर्नुस)
समाजसेवी तथा गरिब दुखीको हिरो शिशिर भण्डारीले भर्खरै मात्र बिनोद रानाभाटको अभियान सम्पन्न गरे ,। उक्त अभियानमा ८२ लाख तिर्नुपर्नेमा शिशिरले मात्र १९ लाख ५० हजार सँकलन गरेका थिए । यसैबिच शिशिरलाई हेटौंडामा सम्मान गरिएको ...
म्युकिज भिडियो हुँदै फिल्ममा प्रवेश गरेकी केकी अधिकारीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा एक दशक बिताइसकेकी छिन्। सन् २०१० मा फिल्म ‘स्वर’ बाट डेब्यू गरेकी उनले थुप्रै स्मरणीय फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन्। अघिल्लो साल ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ बनाएर निर्माणमा ...
होटेलमा सेतो तन्ना बिछ्याइन्छ, आखिर किन ?
होटलका कोठा हुन् वा धर्मशाला, तपाइँले देख्नु भएको होला बेडमा सेतो तन्ना नै ओछ्याइएको हुन्छ। तर के तपाइँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ होटलका बेडमा किन सोतो तन्ना नै विछ्याइन्छ? जबकि सोतो रंग नै सबैभन्दा छिटो ...
बबाल कमेडी गित हेर्न छुटाउनु भयोकी ?
काठमाडौँ । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व तीज आउँनुभन्दा तीन महिना अगाडि बाटै तीज गीत बजारमा आउन थालेका हुन्। अहिले बजारमा दिनकै करिब दर्जनबढि गीतहरु आईरहेको छन्। यहि तीज गीतको भीडमा अर्को एउटा गीत ‘रोगी बुढी’ ...
नोट :- [भिडियो हेर्न तल जानु होस ] कसैले तपाईको पैसा फिर्ता गरिरहेको छैन वा दुःख दिइरहेको छ भने अपनाउनुहोस यो सजिलो तरिका……पूरा पढ्नु होस ।। यदी कसैले तपाईको पैसा फिर्ता गरिरहेको छैन या बिनाकारण ...